Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jebinta Wararka Qadar » Qatar Airways waxay ballaarisay tijaabada IATA Travel Pass
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Qatar Airways waxay noqoneysaa diyaaradii ugu horeysay ee isku darka shahaadooyinka talaalka ee barnaamijka moobiilka 'Digital Passport'.
Maxkamadeynta la balaariyay waxay u sahlaysaa dadka safarka ku tagaya Doha inay la wadaagaan shahaadadooda talaalka Qatar ee ay moobaylkooda ugu gudbiyaan shirkada diyaaradaha iyo maamulada si ka amni badan, bilaa sumad iyo amni leh.
Tijaabada waxaa lagu soo rogi doonaa wajiyo, iyada oo laga bilaabayo shaqaalaha kaxeeya ee ka socdaalaya Kuwait, London, Los Angeles, New York, Paris iyo Sydney.
Qatar Airways ayaa weli ku adkeysaneysa yareynta waraaqaha iyo siinta khibrad safar oo xiriir la'aan, ammaan iyo xasiloon la'aan ah rakaabkeeda.
Qatar Airways ayaa sii wadaysa dejinta halbeegga hal-abuurnimada, amniga iyo adeegga macaamiisha, iyadoo noqotay diyaaraddii ugu horreysay ee tijaabisa xaqiijinta tallaalka COVID-19 iyada oo IATA Safarka Pass 'Passport Dijital ah' Mobile App. Maaddaama safarro badan ay ku soo laabanayaan cirka, duulimaadku wuxuu weli ku dadaalayaa yareynta waraaqaha iyo bixinta khibrad badan oo xiriir la'aan ah, aamin ah oo aan xuduud lahayn oo rakaabkeeda ah.
Maxkamadeynta waxaa lagu soo rogi doonaa wajiyo ka bilaabma bisha Luulyo, iyada oo laga bilaabi doono bilowga marka hore shaqaalaha kaxeynaya ee ku laabanaya Doha iyagoo ka soo safraya Kuwait, London, Los Angeles, New York, Paris iyo Sydney. Shaqaalaha kaamilahu waxay awoodi doonaan inay ku soo rogaan aqoonsigooda tallaalka Qatar ee ay soo saartay COVID-19 oo ay la socdaan natiijooyinkooda tijaabada COVID-19 ee barnaamijka IATA Travel Pass Mobile Mobile iyo inay hubiyaan inay xaq u leeyihiin inay safraan. Markay yimaadaan Doha, shaqaaluhu waxay markaa awood u yeelan doonaan inay si nabadgelyo leh oo nabadgelyo leh ula wadaagaan shahaadadooda tallaalka oo ay uga sii gudbaan socdaalka garoonka diyaaradaha.
Madaxa fulinta ee shirkadda Qatar Airways, mudane Akbar Al Baker ayaa yiri: “In kasta oo ay jiraan caqabado muhiim ah oo uu cudurku u leeyahay duulimaadyada caalamiga ah, haddana warshadeennu waxay sii waday inay hoggaamiye u noqoto qaadashada teknoolojiyada cusub iyo ikhtiraacyada cusub si loo hubiyo khibrad safar oo aamin ah, aamin ah oo aan xaddidneyn. rakaabkeena. Qatar Airways waxay ku faaneysaa inay hogaamiso wadada iyadoo noqota duulimaadkii ugu horeeyay ee tijaabiya xaqiijinta tallaalka COVID-19 iyada oo loo marayo IATA Travel Pass 'Digital Passport' Mobile App. Waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo Wasaaradda Caafimaadka Bulshada ee Qatar, Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Hay'adda Daryeelka Caafimaadka Aasaasiga ah iyo Hay'adda Caafimaadka ee Hamad, kuwaas oo la'aanteed taageeradooda joogtada ah, tijaabadani aysan suurta gal ahayn.
“Waan ognahay in dad badan ay bilaabayaan qorsheynta ku laabashada meelaha ay jecel yihiin ee fasaxa, si lama huraan ah ayay wajihi doonaan caqabada ah inay hubiyaan inay haystaan ​​waraaqo sax ah. Iyadoo la adeegsanayo tijaabinta iyo taageerida horumarinta tikniyoolajiyadaha cusub, waxaan hiigsaneynaa inaan siinno dadka socotada ah qalab ka caawin doona inay si habsami leh uga soo gudbaan xuduudaha kalsooni weyn. ”
Willie Walsh, Agaasimaha Guud ee IATA ayaa yiri: “Qatar Airways iyo Dowladda Qatar waxay muujinayaan hoggaan iyaga oo noqonaya kii ugu horreeyay ee tijaabiya xaqiijinta aqoonsiga tallaalka rakaabka ee loo maro IATA Travel Pass. Shahaadooyinka COVID-19 ee tallaalka ama xaaladda tijaabada ayaa fure u noqon doonta dib u soo celinta xorriyadda dadka ee safarka. Tijaabooyin ay sameeyeen Qatar Airways iyo ilaa 70 shirkadood oo kale ayaa muujiyay in IATA Travel Pass ay si hufan u maamuli karto natiijooyinka imtixaanka. Tijaabadan cusub ee muhiimka ah ee diiradda saareysa heerka tallaalka ayaa xitaa kalsooni dheeri ah ku abuuri doonta IATA Travel Pass oo ah xalka dhammaystiran ee socotada, dawladaha iyo shirkadaha diyaaradaha. ”